नेपाल आज | गाडी बिक्रेतालाई मस्ती, उपभोक्तालाई सास्ती
अर्थ कभर स्टोरी
गाडी बिक्रेतालाई मस्ती, उपभोक्तालाई सास्ती
‘हुन्डाई’ ले यसरी ८ महिनामा ८ लाख झ्वाम पार्यो
सोमबार, २२ माघ २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल अाज(PO)
काठमाडौं । एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारी समीर शाही (नाम परिर्वतन)लाई कार किन्नैपर्ने बाध्यता थियो । विभिन्न कामले उनी काठमाडौं बाहिर जानुपर्ने भएकाले पनि उनी एउटा सजिलो कार किन्न खोजिरहेका थिए ।
धेरै शोरुमहरु धाए उनी । गाडीबारे धेरैले धेरै कुरा सुनाए । सुरुमा दोमनमा थिए समीर । उनलाई विश्वासीलो कम्पनी लाग्यो, हुण्डाईको आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी ‘लक्ष्मी ईन्टरकन्टिनेन्टल प्राइभेट लिमिटेड’ ।
गाडी किन्नु मात्रै भन्दा पनि मर्मत खर्च झन्झटिलो हुने भएकाले मर्मत गरिरहनु नपर्ने गाडीको खोजीमा थिए उनी । हुन्डाईको शोरुममा जाँदा उनले आश्वासन पाए कि, कम्पनीले समयमै मर्मत गरिदिने र खर्च पनि सस्तो हुने । अन्ततः समीरले झण्डै २० लाख खर्चेर हुन्डाईको सेन्ट्रो कार खरिद गरे ।
जब दुर्घटना भयो...
गाडी किनेको ६ महिना पुग्नै लाग्दा समीरको कार दुर्घटना भयो । उनको करलाई पछाडिबाट आएको गाडीले ठक्कर दिएको थियो । उनको कार अगाडिको गाडीमा ठोक्कियो र क्षति भयो ।
गाडीको अगाडि र पछाडिको सीसा फुटेको थियो भने अगाडि र पछाडि पनि क्षति भएको थियो । आत्तिँदै गाडी चलाएरै हुन्डाईको सर्भिस सेन्टरसम्म पुर्याए । वर्षौँको कमाइ संचय गरेर किनेको गाडी वर्षदिन नपुग्दै दुर्घटना भएपछि आत्तिए उनी ।
जब उनी सर्भिस सन्टेरमा पुगे, त्यहाँका कर्मचारीले जस्ताको तस्तै बनाइ दिने भन्दै आश्वस्त पारेका थिए । मर्मतको जिम्मा आफ्नो कम्पनीले लिने र महिना दिन नबित्दै बनाएर दिने उनलाई विश्वास दिलायो । यस्ता शर्त गाडी किन्नुअघि नै पाएकाले पनि उनी ढुक्क भए ।
साँझ सामान्य अवस्थामा घर फर्किए । एक महिना बित्यो, गाडी बनेन । दोस्रो महिनामा पनि बनेन । तेस्रो महिनामा पनि गाडी बन्ने छाँटकाट नदेखिएपछि उनले सर्भिस सेन्टरमै गएर सोधे, गाडी किन बनेन ? त्यसपछि चाहिँ कम्पनीले आफ्नो ग्यारेजमा स्पेयर पाट्र्स नै नभएको बताउँदै आलटाल गर्न थाल्यो ।
कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाउँदै अन्ततः एक वर्षमा बल्ल गाडी मर्मतको काम सकियो । गाडी खरिद गर्नुअघि कम्पनीले उनलाई सुलभ मूल्यमा स्पेयर पार्टस् र सर्भिसको आश्वासन दिएको थियो । समस्या त के भने, मर्मत सकिएपछि जब समीर गाडी बुझ्न गए, लक्ष्मी ईन्टर कन्टिनेन्टलले उनको हातमा सातपाने बील थमायो ।
उनी झसंग भए । जब कि, गाडी खरिद गरेको मूल्यको आधा रकम थियो ममर्त खर्चको बील । बीलमा स्पेयर्स पार्टस्भन्दा लेबर चार्ज बढी थियो । साथै गाडी मर्मत भए पनि गाडीको ‘लुक्स’ नै फेरिदिएको थियो । समीरले कम्पनीसँग ‘किन यस्तो लापरवाही भयो ?’ भनेर सोधे । कम्पनीले बनिबनाउ जवाफ दियो ।
अन्ततः मर्मत खर्च मात्रै आठ लाख तिरेर फर्किए । २० लाखको गाडी १० लाखमा बेच्नुपर्यो । जब कि, उक्त गाडीको रिसेलिङ मूल्य परेको मूल्यको ७५ प्रतिशत हो ।
यसरी गाडी किन्नुअघि समयमै मर्मत गरिदिने शर्त सुनेका समीरललाई लक्ष्मी ईन्टरकन्टिनेन्टले यस्तो धोका दियो कि, त्यो आर्थिकसँगै मानसिक रुपमा पनि झमेला थियो । अनावस्यक रुपमा समय खर्च भयो । समीरका लागि गाडी दुर्घटना भन्दा पनि एउटा कम्पनीले दिएको धोका अप्रिय भयो ।
‘सामान्य क्षति भएको गाडी मर्मत गर्न नै आठ महिना लाग्यो । त्यसमा पनि सर्भिस चार्जभन्दा कर्मचारीको खर्च बढी छ,’ समीरले नेपालआजसँग भने, ‘यस्तो कहीँ हुन्छ ? यो त सरासर उपभोक्तामाथिको ठगी र शोषण हो ।’
समीरका अनुसार उक्त कम्पनीले आर्कषक विज्ञापन सहित मर्मत खर्च सस्तो पर्ने, स्पेयर पार्टस्को राम्रो व्यवस्था, रिसेल भ्यालू राम्रो, देशैभरी सर्भिस नेटवर्क, छुट्को व्यवस्था, विभिन्न गिफ्ट, लक्कि ड्रमा विदेश टूरलगायतका प्रलोभन देखाएको थियो ।
समीरको यो दुख एक प्रतिनिधि घटना हो । अटोमोबाईल्स कम्पनीहरुले पछिल्लो समय कुनै न कुनै रुपमा उपभोक्तालाई ठग्ने क्रम बढ्दोछ । अधिकांश अटोमोबाईल्स कम्पनीले गाडी बेच्नुअघि अनेक ‘स्किम’ मार्फत लोभ्याउँछन् ।
बिक्री भइसकेपछि भने मर्मत नगरिदिने, सर्भिस नदिने र मर्मतका लागि उपभोक्ताले आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गर्ने क्रम बढी छ । सामान्यतः कुनै वस्तु बिक्री गर्नुअघिका शर्त पालना नगरेको अवस्थामा कम्पनीले उपभोक्तालाई ठगी गरेको ठहरिन्छ ।
कम्पनीले गर्ने यस्ता क्रियाकलाप सरासर ठगी तथा कालोबजारी अन्तरगत पर्ने बताउँछन् उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु । कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध ऐन २०३२ का अनुसार यस्ता कम्पनीहरु कानूनी दायरामा पर्छन् ।
नेपालकै आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी लक्ष्मी ईन्टर कन्टिनेन्टल प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालक अन्जन श्रेष्ठ नाडा अटोमोबाईल्स एसोसिएशनका अध्यक्ष समेत हुन् । अटोमोबाइल क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उक्त एसोसिएशनको उद्देश्य पनि हो । तर स्वयं अध्यक्ष रहेको कम्पनीले भने यसरी उपभोक्तालाई शोषण गरिरहेको छ ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा हित संरक्षण विभागले अनुगमनका क्रममा हुन्डाईको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी ईन्टर कन्टिनेन्टले अस्वभाविक रूपमा विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट मूल्य असुल्ने गरेको भेटेको थियो । अनुगमन गरेको दुई महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि विभागले लक्ष्मी ईन्टर कन्टिनेन्टललाई कारवाहीका लागि पहल गरेको छैन ।
विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालसँग यही विषयमा नेपालआजले कुरा गर्दा उनले यस विषयमा केही भन्न नमिल्ने बताउँदैआएका छन् । ‘अनुसन्धानको क्रममा भएकाले बोल्न नमिल्ने’ उनको तर्क छ ।
स्रोतका अनुसार विभागका महानिर्देशक दाहालले नै उक्त कम्पनीलाई बचाउ गरिरहेका छन् । ‘अनुगमन त कम्पनीलाई चोख्याउनका लागि गरिएको प्रपन्च मात्रै थियो,’ विभागकै एक कर्मचारीले नेपालआजसँग भने, ‘लक्ष्मी ईन्टर कन्टिनेन्टलाई कारवाही गर्न डिजी सावले नै चाहनुभएको छैन ।’
केही साताअघि नेपालआजले दाहालसँग ‘कारवाही प्रक्रिया किन रोकियो ? अनुगमन गरेर मात्रै त्यसै किन छोड्नुभएको ?’ भनी सोधेको थियो । दाहालले भने आफूले अनुगमन गरेका कम्पनीहरुले पनि मुद्धा जित्नसक्ने बताएका थिए । नेपालआजसँगको कुराकानीमा उनले आफ्नो तर्फबाट अनुगमनको काम सकेको र अब प्रहरीको अनुसन्धानको पाटो भएको भन्दै सतही जवाफ दिएका थिए ।
यसरी गर्छन् कालोबजारी
लक्ष्मी ईन्टर कन्टिनेन्टलले भारतमा १ लाख ८२ हजार ५ सय ४३ भारतीय रुपैयाँमा खरिद गरेको ‘ईओन ईरा प्लस’ कार १८ लाख ९६ हजार नेपालीमा बेच्ने गरेको छ । जसअनुसार कम्पनीले सबै खर्च कटाएर उपभोक्ताबाट ५४ प्रतिशतभन्दा बढी फाइदा उठाउने गरेको भेटिएको हो ।
यस्तै, हुन्डाईकै ‘ग्राण्ड आई टेन मग्ना’ कारमा पनि कम्पनीले प्रति सवारीसाधन ४४ प्रतिशत मुनाफा उठाउँदैआएको छ । कम्पनीले २ लाख ९२ हजार ५ सय ४२ भारतीय रुपैयाँमा खरिद गरेको गाडी नेपालमा २६ लाख ९६ हजारमा बेच्दैआएको छ ।
यस्तै कम्पनीले ‘एसेन्ट एसएक्स’मा २८ प्रतिशत, ‘क्रेटा एसएक्स प्लस पेट्रोल’मा २७ प्रतिशत, ‘आई टेन एक्टीभा’मा ३५ प्रतिशत फाइदा उठाउँदै आएको छ ।
* उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन तिब्र तर कारवाही शून्य
* कालोबजारी गर्नेहरुलाई यसरी तह लगाउँदैछन् महानिर्देशक दाहालले ९भिडियोसहित०
* अब मोटरसाइकलमा लुट मच्चाउनेहरुको बज्ने भयो बाह्र (भिडियाेसहित)
* कालोबजारी गर्ने कसैलाई पनि छाड्दिन (भिडियोसहित)
* ‘एड्भान्स्ड अटोमोबाईल्स’ले कालोबजारी गरेको भन्दै महानिर्देशक दाहालको निर्देशनमा छापा मारियो
* ‘रेनल्ड’ गाडी र सुजुकी बाईकुमा ब्रह्मलूट, ८ लाखको गाडीलाई ३५ लाख १
* रोकिएन ‘फोर्ड’ गाडीको चर्को कालोबजारी
(नोटः नेपालआजले केही समययता नियमित रुपमा उपभोक्ता हितको क्षेत्रमा समाचार सम्प्रेषण गर्दैआएको छ । तपाईँको परिवारका सदस्य, छिमेकी वा आफन्तजनमा पनि कुनै कम्पनीले केही सामान बिक्री गर्दा बील नदेखाउने वा अत्याधिक महंगो मुल्य तोकेको पाउनुभयो भने नेपालआजको कार्यालयमा सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामी त्यसलाई समाचार बनाएर प्रशारण गर्नेछौँ । जसले गर्दा कालोबजारी गर्ने कम्पनीलाई कानुनी दबाब हुनेछ । सम्पर्कका लागि ९८५११२०८४४÷०१४४८२९५१÷०१४४८२४७६÷०१४४८२४७७ नम्बर ।)
कांग्रेसमा पौडेल र सिटौलाको उत्रियो मुकुण्डो
अब संघीय संरचनाअनुसार ब्रोकरलाई लाइसेन
पशुपतिअगाडिको बागमतीमा कलकल पानी बगाउँछौ (भिडियोसहित)